NgeConte Ruggero, iCentro Storico. - I-Airbnb
NgeConte Ruggero, iCentro Storico.
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uValentina iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo yokuhlala yaseConte Ruggero.
Embindini wedolophu endala (Centro Storico) ejongene nolwandle.
Indawo egqibeleleyo yabantu ukuya kuthi ga kwi-4. Igumbi lokulala elikhulu elinebhedi ephindwe kabini. Igumbi lokuhlambela elineshawa. Kukho igumbi lokuhlala elivulekileyo / ikhitshi elinebalcony ejonge elwandle kunye nepaki. Kukho ibhedi yesofa kwigumbi lokuhlala labantu ababini.
Ukusuka kule ndlu unayo yonke into eMazara kwimizuzu embalwa yokuhamba
Isakhiwo sonke salungiswa ngo-2015.
Ukuhamba umgama ukuya elunxwemeni, uphawulwe kakhulu kunye neendawo zokutyela!
I-Mazara del Vallo, kufuphi neTrapani, inokusishwankathela umlingiswa kunye nembali yesiqithi sonke: ibonisa ngokuziqhenya ihlabathi idolophu yayo endala, iCasbah endala apho iifilosofi zamaSilamsi kunye nababhali, abagwebi kunye nabarhwebi babehamba ngeenyawo.
ICasbah, ikota yakudala yama-Arab, ilikhaya kwizindlu ezininzi kwisitayile esiqhelekileyo sama-Arabhu kwaye iwela ngothotho olungapheliyo lweetonela ezincinci. Ubumelwane buhlala luluntu olukhulu lwaseTunisia, olunceda ukugcina isitayile sisonke sendawo yokuhlala: ezinye izinto eziqhelekileyo ziithayile kunye nezinye izinto zokuhombisa kwiifacade zezindlu.
Isixeko secathedral, iBasil Cathedral, yakhiwa ngabantu baseNormans malunga nonyaka wewaka eliLiwaka kwaye ibonisa isitayile esikhethekileyo esingumxube weRomanesque, Baroque kunye nesiGrike.
I-Basil Cathedral yaseSantissimo Salvatore iphambi kolunye uphawu lwesi sixeko, iPiazza della Repubblica, ejikelezwe njengesithsaba sezona zakhiwo zibalulekileyo. Ukongeza kwiCathedral, kukho iPalazzo del Seminario entle engaphakathi kwiMyuziyam yeDiocesan (enemigangatho emibini kunye neearches ezilishumi elinanye ezinika le plaza ukubonakala kwayo okwahlukileyo); kukwakho neHolo yeDolophu kunye neBhotwe likaBhishophu.
Okokugqibela, phambi kweKholeji, kukho iCawe yaseSant'Egidio, ebamba imyuziyam ezinikele kwelinye lawona magugu abalulekileyo obugcisa bamaGrike: umfanekiso wobhedu weSatiro Danzante. Lo mfanekiso uthathwe ngobusuku phakathi kwe-4 kunye ne-5 ka-Matshi, i-1998, ithathwe kwinqanawa yokuloba "Capitan Ciccio" kubunzulu beemitha ezingama-500 phakathi kwePantelleria neCapo Bon, eTunisia.
Yonke into ingaphakathi kweemitha ezimbalwa ukusuka kwindlu.